New Generations: Regarding Ko Min Ko Niang's invitation...ကိုအောင်ခိုင်မြင်.၏ အတွေးအမြင်----
FIGHT FOR RIGHT TO RESTORE DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN BURMA.
လွတ်လပ်မှု ၊ တရားမျှတမှု ၊ ငြိမ်းချမ်းမှုစသော ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့ အခွင့်အရေး အနှစ်သာရများမှသည် စစ်မှန်သောပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ် ရင်ကြားစေ့ရေးဆီသို့ 
Regarding Ko Min Ko Niang's invitation...ကိုအောင်ခိုင်မြင်.၏ အတွေးအမြင်----
Regarding Ko Min Ko Niang's invitation... ကိုအောင်ခိုင်မြင်.၏ အတွေးအမြင်---- လွန်ခဲ.တဲ. ၂ ရက် က ကိုရွှေထီးကို မေးခဲ.သောမေးခွန်း ၃ ခုကိုပဲ ကနေဒါနိုင်ငံအခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီအရေး နိုးကြားတက်ကြွသူ ကဗျာဆရာ ဘလောဂါ ၈၈၈၈ မျိုးဆက် ဖြစ်သူ ကိုအောင်ခိုင...်မြင်.ကို မနေ.က မေးမြန်းခဲ.ပါတယ်။ တိုင်းပြုပြည်ပြု အလုပ်ပိုင်း တွေမှာ ---- တိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ.သူတွေ၏ အဓိပ္ပါယ် ဖွင်.ဆိုမှုတွေ ကွဲပြားနိုင်သလို၊ တဦးစီ ရဲ. ခံယူချက်ပေါ်တည်မှီပြီး အမြင်တွေလည်း ကွဲပြားနိုင်တာမို.၊ နောက်တစ်ဦး၏ အတွေးအမြင်ကို သူ.စကားအတိုင်း တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကိုအောင်ခိုင်မြင်. ၏မူရင်း စကားများ သေသေချာချာ ဖတ်၊ အားလုံး စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။ လောလောဆည်မှာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဖြစ်လာရမဲ. လက်တွေ့ ကျကျ နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်မျိုး ချက်ချင်းလက်ငင်း ဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမမြင်ပါဘူး လို. သူ က ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ. ပြည်သူလူထုသာလျှင်အဓိကဖြစ်ပြီး၊ ပြည်သူတို.စိတ်ဆန္ဒနဲ. တွန်းအားကို ယူတတ်လျှင် အရာရာရွေ.စေနိုင်တဲ.သတ္တိ တွေပေါ်လာနိုင်တဲ.အကြောင်း၊ လူထုဆန္ဒကို မလေးစားတဲ့ ဘယ်ပါတီမှ နောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရစရာ အကြောင်းမရှိကြောင်း ၊ဒီအချက်များ ကို မည်သူမှ မျက်ခြေ မပြတ်သင်. ကြောင်း ကိုအာင်ခိုင်မြင်.ကပြည်.စုံစွာ ဖြေကြားသွားပါတယ်။) 1--Why do they need all of us to come back? 2--What kinds of implications behind the path that is unclear and unspecific? In the context of parliamentary politics for maximizing national interests, how would they go about breaking their perceived fear: "The government is too big to break." ? 3--What are duties and tasksaperson oragroup must inevitably do to become an essential political entity on the national level? Question 1--ဘာကြောင်. Ko Aung Khine Myint အနေနဲ. သူတို. ၈၈၈၈ ခေါင်းဆောင်တွေက နိုင်ငံခြားရောက်နေသူတွေပြန်လာကြပါလို.ဘာကြောင့်ဖိတ်ခေါ်တယ်ထင်သလဲ။ Answer 1--နိုင်ငံခြားရောက်နေသူတွေပြန်လာကြပါလို.ဖိတ်ခေါ်တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ သူ့ နှလုံးသားထဲကဖြစ်လာတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဖိတ်ခေါ်ချက်ကို လေးစားပါတယ် ။ကျနော့လိုပဲ နှစ်ပေါင်းများစွာ အမိမြန်မာပြည်နဲ့ ခွဲခွာနေသူတွေအနေနဲ့ လည်း တိုင်းပြည်ကို မပြန်ချင်သူတွေ ရှိပါ့မလား ။ ကိုမင်းကိုနိုင်အနေနဲ့ နိုင်ငံတကာရောက်နေသူတွေကို တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်စေချင်တာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာ သူက တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်ကြီးပွားချမ်းသာတာ မြင်ချင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်း တိုးတက်ဖို့ ဆိုရင် သူ့ ဘ၀နဲ့ အသက်ပါ စွန့် လွှတ်ဖို့ ဝန်မလေးသူဆိုတာ အတိတ်သမိုင်းမှာ သက်သေပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့်လဲကိုမင်းကိုနိုင် အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပက မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေ ချစ်ခင်လေးစားကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ တခြားတစ်ဖက်မှာ ကြည့်ပြန်ရင် အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာကနေ ပြန်လာသူတွေအတွက်လုပ်ဆောင်ရမဲ့ ဥပဒေတွေကိုမသိသေးတာလား ၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာလား ဒါမှမဟုတ်လေ့လာနေစဲလားဆိုတာ ဆန်းစစ်စရာတွေ တစ်ပုံကြီးရှိနေပါသေးတယ် ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှာလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် နိုင်ငံတကာကို ရောက်သွားသူတွေကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေက ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ် ။အဲဒီအခါမှာ အစိုးရအနေနဲ့ တတ်သိပညာရှင်များ ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ၊အဝေးရောက် နိုင်ငံသားတွေအပါအ၀င် လူတန်းစားအလွှာအသီးသီးအတွက် ဖိတ်ခေါ်မှုရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အဖြစ် လူသားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ၊အလုပ်အကိုင်ဖန်တီးမှုအပါအ၀င် အခြေချနေထိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာများ၊ စီးပွားရေး နိုင်ငံရေး လုပ်ပိုင်ခွင့်များ အတွက် တိကျခိုင်မာတဲ့ ဥပဒေများ ပြဌာန်းပြီး ရေတို ရေရှည် လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်လုပ်ကိုင်ကြပါတယ် ။မြန်မာပြည်မှာလည်း လက်ရှိအစိုးရ အနေဖြင့် နိုင်ငံခြားရောက်နေသူတွေပြန်လာကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်ရာမှာ လူသားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနတစ်ခုထားရှိပြီှး ရေတိုရေရှည်လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ အဝေးရောက် မြန်မာပြည်သားတွေက မြန်မာပြည်ကို ဗီဇာရလို့ အခြေအနေကိုလေ့လာဖို့ အလည်ပြန်ယုံသက်သက်အပြင်ဘာမှ ပိုလာနိုင်ဖို့ ရာ အကြောင်းမမြင်ပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာ နိုင်ငံတကာမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အခြေကျနေတဲ့ မိသားစုတွေမှာ သားရေး သမီးရေး ပညာရေး ၊မိသားစု ဘ၀ရပ်တည်ရေး၊လူမှု ရေး၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တွေဟာ အခြေကျနေတာမဖြစ်ရင်တောင် မြေစမ်းခရမ်းပျိုးကာ ဘ၀များ ရုန်းကန်ရှင်သန်နေကြတာများပါတယ် ။ ဒါတွေကို လစ်လျှူရှုပြီး ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေစဲ သေချာတဲ့ ဥပဒေတွေမရှိတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ပြည်လည်အခြေချနိုင်ဖို့ ဆိုတာ တစ်ချို့ တလေအတွက်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အများစုအတွက်တော့ အခက်အခဲအကြပ်အတည်းတွေ အနည်းနဲ့ အများ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နိုင်ပါတယ် ။ နိုင်ငံခြားရောက်နေသူတွေမပြောပါနဲ့မြန်မာနယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းကလူတွေတောင် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမရှိရင် တိုင်းပြည်ပြန်ဖို့ ဝန်လေးနေကြတဲ့ အသံတွေ ဆူညံစွာကြားနေရပါတယ် ။ တစ်ဦးထဲအနေနဲ့ ပြောရရင် ၈၈၈၈ ဒီမိုကရေစီ အရေးအခင်းကတည်းက ( ၂၅ ) နှစ်ကျော် တိုင်းပြည်နဲ့ ဝေးကွာခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တတ်ထားတဲ့ ပညာနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းကို ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး မသေခင် အကျိုးပြုချင်ပါတယ်။ Question 2--ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသေး၊ ၊ အသေးစိတ်လုပ်ငန်းတွေလည်း ရှိထား မပြင်ဆင်ထားသေးတဲ. ခုလမ်းကြောင်းမှာ ရှုတ်ထွေးလာနိုင်စရာတွေ ရှိပါသလား။ ဥပမာ- အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို လုပ်ပိုင်ခွင်.နဲ. အစွမ်းကုန် မောင်းနှင်မဲ. လွှတ်တော် နိုင်ငံရေးကတဆင်.အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဖြစ်လာရမဲ. နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ ---အစိုးရက ကြီးလွန်းလို. အစိုးရကို ထိလို. မရဘူး။ သူတို. အခင်းအကျင်းတွေကို ဖြိုခွဲလို. မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ. အကြောက်တရား နဲ. တားဆီးမှုတွေကို ဘယ်လို ဆက်သွား ဆက် ရှင်း ကြမလဲ။ အလုပ်ပိုင်း နဲ. တွဲ ပြောစေချင်ပါတယ်။ Answer 2--လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲအခြေအနေက သန်းခေါင်ယံညကနေ နေရောင်မလာခင် အာရုဏ်ဦးအချိန်မို့အရာရာဟာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိသေးပါဘူး ။ အမှောင်ခေတ်ထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ လူထုတွေကတော့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပြန်လည် ရှင်သန်လာပေမဲ့ အစိုးရရဲ့ အားနဲနေသေးတဲ့ ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေက လူထုကို အကျိုးပြုမှုတွေထက် အာဏာရှင်လက်ဝေခံတွေ ခရိုနီတွေကို ပဲ အကျိုးပြု ကာကွယ်နေသလားလို့ စိတ်ရှုပ်ထွေး နေကြစဲပါ ။ ဒါကြောင့်လည်း နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နိုင်သလားဆိုတဲ့ တန်ပြန်မေးခွန်းတွေ ထွက်ပေါ်ခဲ့တာပါ ။ လက်ရှိသတင်းအချက်အလက်များ အဆိုအရ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ ဆုံရေးက စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်သလို အရင်တုန်းကဘာကြောင့် တွေ့ ဆုံ ဆွေးနွေးဖို့ ကြန့် ကြာနေခဲ့သလဲ ။ ဒါက မြန်မာပြည်အနာဂတ်အတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲစတဲ့ တန်းစီနေတဲ့ မေးခွန်းများမှာ တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကို လက်တွဲအဖြေရှာနိုင်မှသာ ကောင်းမွန်တဲ့ ရလဒ်ကောင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်စရာ အကြောင်းရှိတာမို့ စိတ်ကိုဖြေတွေးနေရသေးတဲ့ ပြည်သူများအဖြစ်ပါ ။ ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေက လက်ရှိနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ တနည်းမဟုတ်တနည်း တိုက်ရိုက်သော်၎င်း ၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်၎င်း ပတ်သက်နေလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲကို အကြမ်းမျဉ်းသုံးသပ်ကြည့်မြင် ရင် ၁၉၈၈ ကနေ ၂၀၁၀ ထိ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုကြားမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးတွေ ၊ အာဏာဖီဆန်ရေးတွေ ၊ အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းရေးတွေ ရှိနေခဲ့တာ ဘယ်လိုမှ ငြင်းဆန်လို့ မရတဲ့ အချက်တွေကိုကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ် ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို NLD ပါတီကဆန့် ကျင်ခဲ့တဲ့အခါ လွှတ်တော်ထဲမှာတစ်ကိုယ်ထဲ အထီးကျန်နေတဲ့ အစိုးရကို နိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့ မှုတွေ ဆက်လက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အတိတ်ကလိုပဲအစိုးရနှင့် အတိုက်အခံကြား တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် ပဌိပက္ခအသွင်ဆောင်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းပဲထားရင် ရေရှည်မှာတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးဟာ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံဖြစ်ယုံမက လူမှုဒုက္ခဆင်းရဲတွင်းကနေ ပြည်သူများရုန်းမထွက်နိုင်မယ်မှန်း နှစ်ဖက်က ခေါင်းဆောင်တွေ သဘောပေါက်လာကြပုံရပါတယ် ။ နှစ်ဖက် ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက အတွေးအခေါ်ပြောင်းလဲပြီး တိုင်းပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို စိတ်ဝင်စားကာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့ အမြင်သဘောထားတွေ ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တို့ အကြိမ်ကြိမ်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုနောက်ပိုင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်လာသလို ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေ ထောင်အသီးသီးကလွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီအကြောင်းတွေကို ဘာလို့ ပြန်လည် တင်ပြနေရသလဲ ဆိုတော့ကာ အဲဒီမှာ ထောက်ပြစရာရှိတာက သူတို့ တွေရဲ့ အနာဂတ်တိုင်းပြည်အပေါ်ထားရှိတဲ့ သဘောထားကို တိုင်းပြည်ကိုချမပြခဲ့ပေမဲ့ သေချာတာတစ်ခုက အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံကြားမှာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေးအစား အပြုသဘောဆောင်တဲ့ တိုင်းပြည်နှင့်လူထုအပေါ် ရလဒ်ကောင်းများပေါ်ထွက်လာနိုင်မဲ့ နည်းဗျူယာတွေနဲ့ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် ချဉ်းကပ်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတာ တွေ့ ရလို့ ပါ ။ အဲဒီလို အတွေးအခေါ် သဘောထားများ ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်း မှာ အများပြောဆို သုံးသပ်နေသလိုပါပဲ NLD ကလွှတ်တော်တွင်းနိုင်ငံရေးလုပ်နေသလို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေက လွှတ်တော်ပြင် ပနိုင်ငံရေးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလမှာ ဘယ်အရာမှ စင်းလုံးချော မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ လုပ်ရင်းကိုင်ရင် နှစ်ဖက်စလုံးမှာ အခက်အခဲအကြပ်အတည်းတွေ တွေ့ နေကြမှာမလွဲပါဘူး ။ အစိုးရအနေနဲ့ ရခိုင်ကိစ္စ ၊ လက်ပန်တောင်းတောင်လို အရေး ၊ ကချင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားအရေး ၊ခရိုနီ ၊အလုပ်သမား ၊ လယ်သမား ၊ ကျောင်းသားစတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမှုများ ပေါ်ပေါက်လာသလို အတိုက်အခံ အင်အားစုအနေနဲ့၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံကို လွှတ်တော်ထဲမှာ ပြင်ဆင်ဖို့ ရာ အခက်အခဲများတွေ့ ရပြီး ၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ လူထုနဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ တဲ့အခါ ဒေသခံလူထုရဲ့အစိုးရအပေါ် မကျေနပ်မှုတွေ အပြင် အစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သိရှိလာပုံရပါတယ် ။ လက်ရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ လွှတ်တော်တွင်းမှာ အသာစီးရထားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ အတိုက်အခံအင်အားစုက အားနည်းနေတာ တွေ့ ရပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီမိုကရေစီနည်းအရမဲခွဲ ဆုံးဖြတ်ရာမှာ လူထုအပေါ်အကျိုးမပြုသော ဥပဒေတွေကို ပယ်ဖျက်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ ဥပဒေတွေကို ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် လွှတ်တော်တွင်းမှာ အားနည်းချက်တွေ ရှိနေပါတယ် ။ ဒီလို အခြေအနေမျိုးထဲမှာပဲ လက်ရှိအစိုးရက ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ်း ၊ ၂၀၁၄ အာဆီယံ ဥက္ကဌဖြစ်ရေးကို မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ဖို့ စိုင်းပြင်းနေပုံရပါတယ် ။ အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီအင်အားစု တွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးမဟာဗျူဟာအရ တစ်ဖက်မှာ နည်းဗျူဟာတွေက အဖွဲ့ အစည်းတစ်ဖွဲ့ နဲ့ တစ်ဖွ့ဲအစိုးရအပေါ်မှာ ချဉ်းကပ်ပုံ ခြင်းမတူတာကို တွေ့ ရပါတယ် ။ လူထုအတွက် လိုချင်တာကိုရဖို့ ရာ တစ်ချု့ အရာတွေမှာ အလျော့ပေးလိုက်လျောမှုတွေတွေ့ ရမှာဖြစ်သလို ပြည်သူ့ အသံ ပြည်သူ့ ဆန္ဒကိုအခြေခံပြီး အစိုးရနဲ့ မဖြစ်မနေလက်တွဲလုပ်ဆောင်မှုတွေကို လည်း တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အစိုးရအနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအ၀င် ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို နိုင်ငံတကာအား စေလွှတ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ် နိုင်ငံတကာက စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှုတွေကိုရုပ်သိမ်းယုံမက စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ လုပ်လာတာကို တွေ့ ရပါတယ် ။ အဲဒီအခါမှာ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ ရာ နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုက မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပြီး အားလုံးကို လုံခြုံ စိတ်ချရတဲ့ ဥပဒေရေးရာမှာ ရေခံမြေခံကောင်းဖို့ ရာလည်း အထူးလိုအပ်နေပါတယ် ။ သေချာတာက ရေရှည်မှာ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့့ဥပဒေရေးရာ အားနဲတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေး ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်ဖို့ မေးခွန်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာစရာ ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးက ချိနဲ့ နေသေးတာတွေ့ ရပါတယ် ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ကာ နာဂစ်မုန်တိုင်းကာလမှာ လူထုဆန္ဒမပါပဲအတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံရဲ့အားနည်းချက်တွေ ကြောင့်ပါ ။ အဲဒီအခါမှာ အထက်ပါမေးခွန်းထဲကလို အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို လုပ်ပိုင်ခွင်.နဲ. အစွမ်းကုန် မောင်းနှင်မဲ. လွှတ်တော် နိုင်ငံရေးကတဆင်.အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဖြစ်လာရမဲ. နိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ဟာ လက်တွေ့ ကျကျ ချက်ချင်းလက်ငင်း ဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းမမြင်ပါဘူး ။ အစိုးရအနေဖြင့် ပြည်တွင်းစစ် အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားအရေးတွေကို ဆွေးနွေးရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊အနာဂတ် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ရာမှာ ဖြစ်ဖြစ် လွတ်လပ်မှု ၊ တရားမျှတမှု ၊ ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကိုအခြေခံကာ ပွင့်လင်းရိုးသားမှုတွေ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။တိုင်းပြည်အပေါ် စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားဖို့ လိုသလို အတွေးအခေါ် အမြင်ကျယ်ဖို့ လည်းလိုပါတယ် ။ ရှေ့ မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာနိုင်ငံရေးအခြေအနေကနေ ယခုလိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အပြောင်းအလဲမြန်သော နိုင်ငံရေးအခင်းအကျဉ်းတွေ ဖြစ်ပေါ်နေရာမှာ အကောင်းမြင်သူတွေ ရှိသလို အဖြစ်အပျက်တစ်ခုခြင်းကို ခြုံငုံကြည့်ရင် အားမလို အားမလို အားမရတွေ ဖြစ်နေသေးတာလည်း သဘာဝကျပါတယ် ။ လက်ရှိအစိုးရအနေနဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်ပြောင်းလဲတာကိုဖြစ်ပေါ်စေချင်ရင် သေချာတာတစ်ခုက လက်တွေ့ ကျတဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲထဲမှာ အားလုံးပါဝင် နိုင်တဲ့ အခင်းအကျဉ်းကို လက်ရှိအစိုးရမှ မူဝါဒများချမှတ်ပြီးလုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ် ။ သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေး ပါတီတွေ အနေနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရှေ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ပြီး လွှတ်တော်တွင်း နိုင်ငံရေးကို ပိုမိုအားကောင်းလာအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရေးကို များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်လာနိုင်စရာ အကြောင်းရှိပါတယ် ။ Question 3--တနိုင်လုံးအတိုင်းအတာ နဲ. လူတဦး သို. မဟုတ် အဖွဲ. အစည်း တစ်ရပ်ကို နိုင်ငံရေးအရ ထောက်တည် ကျားကန်ပြုနိုင်တဲ. ခိုင်မာတဲ. နိုင်ငံရေး အဆောက်အဦဖြစ်လာအောင် ( မဖြစ်မနေလုပ်ရမဲ.) တာဝန်နဲ. အလုပ်တွေကို အကြမ်းဖျင်း ပြောပြပေးနိုင်မလား။ Answer 3---နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ လူထုထံမှ မဲရဖို့ လူထုကို ချဉ်းကပ်ခြင်းက အမြင်မတော် ကြည့်လို့ မကောင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီ ပုံရိပ်တွေပါ ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေက လူထုနဲ့ အမြဲ ထိတွေ့ ဆက်ဆံနေပြီး လူထု၏ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးယုံမက လူထုအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ ဥပဒေတွေ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိ လုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ် ။ ပါတီတွေသာမက သက်ဆိုင်ရာ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းတွေက စစ်အာဏာရှင် စနစ်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ နား မျက်စိပိတ်ခံထားရတဲ့ ပြည်သူများအား ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာ သဘောတရားရေးများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ပို့ ချနေယုံမက လက်တွေ့ ကျကျလုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်ပြီး လုပ်ဆောင်နေသင့်ပါတယ် ။ လူထုကို အခြေခံတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ယန္တရားမှာ လူထုဆန္ဒ ၊ လူထုအသံတွေဟာ ဆန္ဒပြပွဲတွေကတဆင့်ဖြစ်စေ ၊ အကြောင်းအရာပေါ်မူတည်ပြီး လူထုရဲ့ လက်မှတ်ထိုးတောင်းဆိုမှုတွေကနေတစ်ဆင့် ဖြစ်စေ လွှတ်တော်ထဲထိရောက်အောင် အတိုက်အခံပါတိတွေသာမက လွှတ်တော်ပြင်ပ အဖွဲ့ အစည်းများကပါ တတပ်တအား ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ရမှာပါ ။ အဲဒီအခါမှာ အစိုးရအနေနဲ့ လူထုဆန္ဒကိုလေးစား လိုက်နာသလား ၊ လူထုအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုရှိသလားဆိုတာ ထင်ထင်ရှားရှားအဖြေထွက်လာမှာပါ ။ အဲဒီရလဒ်ရဲ့ အကျိုးဆက်အဖြစ် လူထုဆန္ဒကို မလေးစားတဲ့ ဘယ်ပါတီမှ နောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရစရာ အကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး ။ အစိုးရက ကြီးလွန်းလို အစိုးရကို ထိလို. မရဘူး။ သူတို. အခင်းအကျင်းတွေကို ဖြိုခွဲလို. မဖြစ်သေးဘူးဆိုတဲ. အကြောက်တရား နဲ. တားဆီးမှုတွေကို လူထုအားနဲ့ ဖြတ်သန်းရမှာပါ ။ အစိုးရနဲ့ အတိုက်အခံတွေကပါ လေးစားရတဲ့ လူထုကွန်ယက်များ မှ တဆင့် လူထုချင်း ချိတ်ဆက်ပြီး လူထုအသံ လူထုဆန္ဒများကို စဉ်ဆက်မပြတ် ဆွေးနွေးအဖြေရှာ သင့်ပါတယ် ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်ကြိုးစားပြီး မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားထားပါတယ်.၊ .အခုလို အချိန်ယူပြီး တကူးတက မေးကာ အတွေးအခေါ်တွေကို ဖလှယ်တဲ့ မအေးအေးစိုးဝင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အောင်ခိုင်မြင့် 23 February 2013
Home Page ( ပင်မစာမျက်နှာ )
Burmese Poem Gallery
Burmese poems Gallery
English Poems Gallery
ဇော်ဝမ်းမောင် ၏ မြန်မာ.ပြည်သူ. သတ်မတော် နှင်. နိုင်ငံကိုဆင်းရဲတွင်းပို.ခဲ.သူများ အပိုင်း၁-၅
ဘာသာရေး ပြဿနာများ (၅) ရဝေထွန်း
၈၈ တောခိုကျောင်းသားများ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ABSDF သေ့ဘောဘိုးစခန်းဖြစ်ရပ်မှန်များ - မိုးတိမ်(သေ့ဘောဘိုး)
အိုဘယ့် အနော်ရထာ - တက္ကသိုလ်စိန်တင်
အမြင့်ပျံတောင်ပံခေတ်သံ ( Aya )
မတ်လ(၈)ရက်နေ့ ထုတ် HR ဂျာနယ် အမှတ် (၁၈၅)
ချစ်သမီးထံသို့ - ပါရဂူ
အိုင်ကျူ မည်မျှပုံ၍ယုံရမည်နည်း - တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်
လေးစားပါတယ် ဘ၀တန်ဖိုး - ဆရာတော်ဦးဇောတိက
လဇူလိုင်ကို ရဲဝံ့သူသာပိုင်တယ် နှင့် အခြားကဗျာ(၉)ပုဒ်- ငြိမ်းလူ
ကမ္ဘာပြားပြီ - ကျော်ဝင်း
ဥဒါန်းမကြေ (1962 ဇူလိုင် 7-8 ရက်) - အောင်စောဦး
သိပ္ပံနည်းကျ အိမ်ထောင်သည်ဘ၀ - ဒေါက်တာမောင်မောင်ညို
လူငယ်တွေရဲ့ကဗျာ(၂၀၀၃) - အောင်ဝေး
အနာဂတ်နိုင်ငံတော်သား(သခင်မြသန်း)ကွယ်လွန်ခြင်းအနှစ်၃၀ မြောက်ဂုဏ်ပြုရေးသားချက်များ -....
တဂိုးဝတ္ထုတိုများ - မြသန်းတင့်
တိုက်ရေယာဉ် ၁၀၃ - မောင်သော်က
ကျောက်ကပ်နှင့်ဆီးရောဂါမျိုးစုံ - ဒေါက်တာ မောင်မောင်ညို
၂၀ရာစု ၀တ္ထုတို(၁၀၀) စာရေးဆရာ (၁၀၀)
ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့သော လေးဖြူ - ပေါ်ဦးသစ်
ဆိုင်ဂုံ(၁+၂+၃) - မောင်ထွန်းသူ
ဆိုင်ဂုံ(၄+၅+၆) - မောင်ထွန်းသူ
မြန်မာကဗျာဖွဲ့နည်း - တင်မိုး(ကဗျာဆရာ)
ကုန်းဘောင်ရှင်းတမ်း - မောင်သန်းဆွေ(ထားဝယ်)
သီပေါမင်း ပါတော်မူ အရေးတော်ပုံ - အမျိုးသားပညာဝန် ဦးဖိုးကျား
ချေဂွေဗားရား - လင်းယုန်မောင်မောင်
ပုဂံခေတ်အလှူဆိုင်ရာဆုတောင်းနှင့်ကျိန်စာများ - မင်းဆွေ(ရှေးဟောင်းသုတေသန)
အတတ်ပညာ ၊ နည်းပညာ စာအုပ်များ
ပို့ကုန် သွင်းကုန်ဥပဒေ (၂၀၁၂ ၊ စက်တင်ဘာ ၇)
Microsoft Access 2010 ဖြင့် Database Program ရေးဆွဲခြင်း - ကိုမြန်မာ
တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦး၏ တင်ပြချက် - ဗိုလ်ထက်မင်း
တရုတ်နိုင်ငံရေးသုခမိန် တိန့်ရှောက်ဖိန် - ဟိန်းလတ်
လက်ပံတောင်းတောင် အရေးအခင်း - အံ့မောင်
သမိုင်းထဲက မန္တလေး ......မန္တလေးထဲက သမိုင်း - မြသန်းတင့်
ဗေဒါလမ်း ကဗျာစု - ဇော်ဂျီ
ကျွန်တော်သိသော ခေတ်သစ်ဟင်္သာကိုးသောင်းပုံပြင် - မောင်မောင်(ရွှေကရ၀ိက်)
လက်ပန်တောင်းတောင် အစီရင်ခံစာ (Report on Latpadaung by People Defense Committee)
ငြိမ်းချမ်းရေး အမေနဲ့ စစ်တလင်းမြေ နှင့် ကဗျာများ ( အောင်ခိုင်မြင့် )
၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီလ (၅)ရက်နေ့ ထုတ် ရန်ကုန်တိုင်း(မ်)ဂျာနယ် အတွဲ(၉)အမှတ်(၆)
Peace Falls – sixteen poems ( David Prater )
Dead Poem Office ( David Prater )
ဖေဖော်ဝါရီ ၇ ရက်နေ့ထုတ် Venus News Weekly အတွဲ ၄ အမှတ် ၂၉
အမှောင်ကန့် လန့် ကာကို ဆုတ်ဖြဲပစ်ခြင်း( သို့ မဟုတ် )ေ၇ွှအိုရောင် အနာဂတ်နေ့ သစ်သို့ လျှောက်လှမ်းခြင်း ( အောင်ခိုင်မြင့် )
Virus တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ FREE DOWNLOAD လို့ ရတဲ့ ကောင်းမွန်သော malwarebytes
ကိုယ်တွေ့ ပင်လုံ (ဦးဖေခင်)
Free download ဆွဲလို့ရတဲ့ မြန်မာစာအုပ်များ
Alpha Zaw Gyi Unicode ( ဇော်ဂျီ မြန်မာ Font
သမိုင်း၏ကဗျာမှန်ကူကွက်များ ( ဧရာ )
မြန်မာပြည်သားစာစောင်The Burmese Journal (November-2012)
ခေတ်မီးတောက်တွင်းမှဖောက်ထွက်ခြင်း( ဧရာ )
အကြမ်းဖက်မှု ဆိုရာဝယ် (MISS Security and Counterterrorism Studies Paper 2)
မြန် မာ့အရေးကျွ မ်းကျင်သူ ဘာတီးလင့်တ်နာ (Bertil Lintner) နှင့်တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခြင်း
မြန်မာ့စီးပွားရေးနှင့်ဦးပိုင်လီမိတက် ( ဧရာ )
ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၂၉)
The Burmese Journal (October-2012)
The Burmese Journal (September- 2012)
The Voice Journal ( October 7, 2012 )
အိုဂျေရုဆလမ် ( ကျော်အောင် )
ခေတ်မောင်း အတွဲ (၁) အမှတ် (၅)
မြစ်မခ Myit Makha Mediagroup
ခေတ်မောင်း လစဉ်ထုတ် အွန်လိုင်း စာစောင် အတွဲ (၁) ၊ အမှတ် (၄)
Benefit Concert for the displaced the Kachin people in Northern Burma
ဒီလှိုင်းစာစောင် အတွဲ၁ ။ အမှတ်(၂၈)
"မြန်မာဘလော့များစုစည်းမှု- နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )"
၂၄ ဘာသာကို မြန်မာလိုပြန်နိုင်ပြီ
မြန်မာပြည်သားစာစောင် (၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လ)
ရဲရင့်သက်ဇွဲ ၏ ရင်တွင်းဖြစ် ကဗျာများ
D. Wave.Vol.1.Nr.25 ( ဒီလှိုင်းစာစောင် )
ခေတ်မောင်း လစဉ်ထုတ် စာစောင် အတွဲ (၁) အမှတ် (၃)
"ရခိုင်ဒေသအတွင်းသို့ မွတ်ဆလင်များ ၀င်ရောက်လာခြင်း
ပြည်သူ့လွှတ်တော် Web Page
The Burmese Journal (July- 2012)ဇူလိုင်လ ၂၀၁၂ မြန်မာပြည်သားစာစောင်
မလေးရှားရောက် နိုင်ငံခြားသား အိမ်ဖော်များ၏ ရင်နင့်ဖွယ် ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်များ
မြန်မာစာအုပ် များ( E Books Myanmar Versions & English Versions)
ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ (သင်ခန်းစာ)
2008 မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း ...
The Voice စာစောင် _ 8 - 13 _ 2012 March 12 - 2012 March 18
မြသန်းတင့် - လိုက်ခဲ့တော့ မြနန္ဒာ
သမိုင်းတရားခံ ( ရေးသူ-ဆရာတော်ဝီရသူ)
ကျောင်းသား၊ ထောင်၊ တော်လှန်ရေးသမား (ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း)
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
လွတ်လပ်ရေး၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးနှင့် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု (ဦးခင်မောင်ကြီး - ဗကသခေါင်းဆောင်ဟောင်း)
စကားဝါမြေ ၊ အွန်လိုင်းစာကြည့်တိုက်
မြန်မာပြည်အကြောင်း၊ ဒေါ်စုအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ၊ E-books
ထူးအိမ်သင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၇ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် “အစိမ်းရင့်ရောင် ရက်စွဲများ”
နေသွင် - နှလုံးရည်တိုက်ပွဲ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ နိုင်ငံရေးဒဿန)
ပေါ်ပြူလာ စာပေ နှင့်အနုပညာ ဂျာနယ်
မြသန်းတင့်-ရွှေပြည်တော်မျှော်တိုင်းဝေး ( ပထမပိုင်း)
ဦးသန့်အရေးအခင်း( စက်မှုတက္ကသိုလ်-စိုးဝင်း )
မြန်မာနိုင်ငံကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသမိုင်း ( အောင်ထွန်း)
ဥရောပယဉ်ကျေးမှု အနုပညာမိတ်ဆက် ( ဒေါ်ခင်မျိုးချစ် )
ဗီဇနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ( ဦးအေးမောင် )
ကမ္ဘာ့စာပေ တစေ့တစောင်း ( နတ်နွယ် )
ကဗျာဆရာ၏ရိုးဖြောင့်မှု ( ဒဂုန်တာရာ )
ဘွိုင်ကောက်ဋီကာ ( သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း )
လူထုချစ်သမျှ လူထုဦးလှ ( ပထမပိုင်း)
ကိုယ်တိုင်ရေးဘ၀ဇာတ်ကြောင်း ( ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း)
နောက်ကြည့်မှန် ( မင်းကိုနိုင်)
ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ ( ဦးဝင်းတင်)
ဗန်းမော်တင်အောင် သို့မဟုတ် နရသိန်မှအကျဉ်းသား(ဒဂုန်တာရာ)
ဂန္တ၀င် မြန်မာကဗျာ( မောင်သာနိုး)
ထင်လင်း - စည်းအပြင်ကလူ
မြသန်းတင့် - လက်ဖက်ရည်ဆိုင်
ကြယ်ကိုးစင်း နဲ့ ကောင်းကင် (ဝတ္တုတိုစုစည်းမှု)
မြသန်းတင့် - မှောင်မိုက်မှာငို
လူထုဒေါ်အမာ - မြန်မာ့မဟာဂီတ
လူထုစိန်ဝင်း- လူငယ်နဲ့ တာဝန်ယူစိတ်
တာရာမင်းဝေ - လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကျောက်ထွင်းရာဇ၀င်
မောင်ချောနွယ် - လူကြိုက်နည်းတဲ့ကောင်
တာရာမင်းဝေ - မိုးခေါင်လို့တီးတဲ့ဗုံသံ နှင့် တခြားကဗျာတိုများ
သိန်းဖေမြင့် - တက်ဘုန်းကြီး
တက္ကသိုလ်စိန်တင် - ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးဗိသုကာ ဦးသန့်
မြသန်းတင့် - မော်ဒန်ကဗျာနှင့်ပက်သက်၍
အောင်ချိမ့်၊ ဖော်ဝေး ၊ မောင်ချောနွယ် -သစ်ရွက်အသေပေါ်ကရက်စက်သောဂီတ
သွေး (ဂျာနယ်ကျော် မမလေး)
ဆရာဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ “အနုပညာ၏အသုံးဝင်မှုတန်ဖိုးနဲ့ အနုပညာ၏တန်ဖိုး
မာယာကော့စကီးရဲ့ “ဘောင်းဘီဝတ် မိုးတိမ်”။
တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန် -ဗိုလ်မှူးကြီး(ဟောင်း) တင်မောင်
ဗမာပြည်ကမောင်လူလှ ( ကဗျာ )-တင်မိုး
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ စာပေအနုပညာ (၀ါ) မှိုင်းဗေဒ- ဒဂုန်တာရာ
ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ရေး ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် )
(၄၉ တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်တဦး၏ ဒိုင်ယာရီ)ရဲဘော်ထွန်း
ဧရာ မြစ်ဝါ ဂင်္ဂါ
စာမဲ့ကဗျာ ( ပန်းချီအောင်စိုး)
တရုတ် နျူကရီးယားပါဝါ (CHINESE NUCLEAR FORCES)
GANDHI ( ဂန္ဒီ )
ကြာဦးဖြူ(ရခိုင်ရိုးမမှာ ဘ၀တကွေ့)
(မှော်ပီ ဆရာသိန်း). ပစပ် ရာဇ၀င်
ထောက်လှမ်းအရာရှိ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ကြည်ဆွေ(အာဏာရှင်ကြီး၏ အတွင်းရေးများ )
အရှေ့က နေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ-၁ ( သိန်းဖေမြင့် )
အရှေ့က နေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ-၂ ( သိန်းဖေမြင့် )
အကျဉ်းစံ အရူံးသမား၏ အညှင်းခံနှလုံးသား( ၀ီရသူ )
၂၀ဝ၈ အခွခေံဥပဒေ ပွငျဆငျရေး ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ UNA အဖှဲ့ခေါငျးဆောငျမြားတှဆေုံ့
ခတ်တာနနျး - အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ဥက်ကဌ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျနှငျ့ ညီညှတျသော တိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား မဟာမိတျအဖှဲ့ (UNA) အဖှဲ့ဝငျ ပါတီခေါငျးဆောငျမြား...
အမေရိကန်အစိုးရက ထုတ်ပြန်တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာထဲမှာ လူကုန်ကူးမှု ကျူးလွန်တဲ့ အဆိုးရွားဆုံးအဆင့် Tier3အဆင့်မှာရှိခဲ့တဲ့...
မိ။ ဖြစ်ပါ့မလားကွယ်.. မင်းချံ ရယ်… မင်း။ ဘာလို့ မဖြစ်ရမှာလဲ ကွယ်…. မိ။ ရှင်နဲ့ ကျမက ဘာသာမတူဘူးလေရယ်.. မင်း။ ကိုယ်နဲ့မင်း ဘာသာမတူတာ ကိုယ်တို့မွေးလာတဲ့ တိုင်...
ရဲ ကို ရဲက ပြန်နှိမ်နင်းနေပြီ
စစ်ကိုင်းတိုင်း ကလေးနဲ့ တမူးခရိုင်ဘက်မှာ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ရဲကို ရဲချင်း စီးနင်း နှိမ်နင်းမှုတွေ လုပ်နေပါ တယ်။
ဓာတ်ပုံ- မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ရဲဇာနည်ေ...
ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားကို နိုဝင်ဘာနှင့် ဘုရင့်နောင် ခုံးကျော်တံတားကို ဒီဇင်ဘာအတွင်း အပြီးတည်ဆောက် သွားမည်
Thursday, 20 June 2013 ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း တည်ဆောက်လျက်ရှိသည့် ရွှေဂုံတိုင် ခုံးကျော်တံတားကို နိုဝင်ဘာနှင့် ဘုရင့်နောင် ဂုံးကျော်တံတားကို ဒီဇင်ဘာအတွ...
ကာတွန်း စောငို - အပြောတွင်သာ ရွှေမန်း မဟုတ်ပါဘု၊ အနုအကြမ်း အသတ်အဖြတ် စွယ်စုံရတဲ့ မင်းသားပါဗျ .. (ပလို့ဂျိ)
ဇွန် ၂၀၊ ၂၀၁၃
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေ ဂွတ်ခိုင်မြို့နယ် နမ်ဖတ်ကာ ကျေးရွာ (Nam Hpat Ka)ရှိ KIA နှင့် တအောင်း (ပလောင်) တပ...
အစိုးရနှင့် ကေအဲန်ယူတို့ ဇူလိုင်လအတွင်း အလွတ်သဘော ထပ်မံတွေ့ဆုံရန်ရှိ
ဇွန်လ ၁၉ရက်၊ ၂၀၁၃ခုနှစ်။ စဖန်းရှောင်း (ကေအိုင်စီ) ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ) ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ လာ...
ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က အမှန်တရားများ
့ မြန်မာသံရုံးများမှ ၀င်ငွေခွန်ကောက်ခံသည့်နှုန်းထားသည် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ မတူညီကြသော်လည်း ပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများအကြား တူညီသော ယုံကြည်ခံစားမ...
A ministerial statement is expected "shortly", according to Member of Parliament Alex Yam. Posting on his Facebook page, Mr Yam said: "Dear all, I have j...
အိုင်အယ်လ်အိုက မြန်မာအပေါ်တားမြစ်ချက် အကုန်အစင် ရုပ်သိမ်း
ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ ဂျနီဗာမြို့မှာကျင်းပတဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ညီလာခံကနေ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်ထားရှိတဲ့ တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်တွေကို အကုန်အစင် ရုပ်သ...
ဥရောပဈေးကွက်တွေ တင်ပို့မယ်ဆိုရင် ပို့ကုန်တွေက တန်းမြင့်ပြီး အရည် အသွေးမီတဲ့ ကုန်စည်တွေမှ အဆင်ပြေမယ်၊ ဆန်စပါး ကဏ္ဍမှာလည်း အနောက်နိုင်ငံတွေဆီ တင်ပို့ဖို့ ဆိုရ...
ပြည်သူလူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့(၆၈) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အတွက် ဆုတောင်း။
“အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ” ဆိုတဲ့ “ကျန်းမာရေးသည် လာဘ်တစ်ပါး” ဆိုသည့်အတိုင်း ...
တောငျကွီးရောကျ တောငျပိုငျး သြှမျးပွညျတပျမတျော RCSS ခေါငျးဆောငျ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီးယှကျစဈ နှငျ့ အဖှဲ့သညျ တောငျကွီးရှိ ဌာနဆိုငျရာမြား၊ အပဈရပျတပျဖှဲ့မြား...
မြစ်ဆုံ.......................................၀၅ ကျပ် (ရောင်းပြီး)
ဧရာဝတီ..................................၁၀ ကျပ် (ရောင်းပြီး)
ဆေး သစ်၊ ရေးသူ - ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်)
ဆေး သစ် မော် လ မြိုင် က ဘုန်း ကြီး ဘိုး
လျှာ ပွတ် လျက် ဆား ဆေး တန် ခိုး
အ စာ မ ကြေ ရော ဂါ ဆိုး
ပျေက် ကင်း နိုင် တယ် ဝ ဝ ဖြိုး .. .......
ကျေး ဇူး တေ...
ဒါ သတင်းပဲ။ ညိုကြီး ၁၂း၃၃ AM
အောင်ခိုင်မြင့်၏ ခံစားချက် စာမျက်နှာ
အတွေးအခေါ်ဟောင်းများ ခေါင်းပေါင်း တလူလူ အထက်ကောင်းကင်မှာ အရေးပေါ် ဆေးသောက်မှားတဲ့ အတ္တမ...
ရွှေဘုန်းတော်တိုးပါလို့ ငွေမိုးတွေရွာဆိုလိုက်လို့ အရမ်း သာဓုမခေါ်လိုက်နဲ့အုံးဗျ။ မဟုတ်မဟတ်ကို အဟုတ်မှတ်ပြီး ကောင်းချီးပေးမိလို့ အသာဓု.. နသာဓု.. မသာဓုတွေ ဖြစ်...
ရွှေတောင်တွင် စစ်တပ်က သိမ်းထားသော မြေများ ပြန်ရအောင် တောင်းဆိုမည်
ပဲခူးတိုင်းအနောက်ခြမ်း၊ ပြည်ခရိုင်၊ ရွှေတောင်မြို့အနီးတွင် ၅ဝ၉ အမြောက်တပ်ရင်းမှ သိမ်းသူထားသော လယ်မြေဧကတစ်သောင်းကျော်ကို ပြန်လည်ရရှိ အောင်တောင်းဆိုသွားမည်ဖြစ...
ဒ ဂု န် တာရာေ နွ ဦး( ၃ )
တွံတေးတောကြီးတန်းနဲ့ ကိုးန၀င်းအဖွဲ့ ဒလမြို့နယ်ကို သောက်ရေသန့် လှူ
http://www.burmavjmedia.net/?attachment_id=20586 သောက်ရေ သုံးရေ ပြတ်လပ်နေသည့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒလမြို့နယ်ရှိ အမှတ် (၉)ရပ်ကွက်သို့ တွံတေးမြို့နယ် တောကြီးတန်း ပ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ငါး ပုဇွန်ဟင်း
--- Friday, May 10, 2013 အခု ဓာတ်ပုံမှာ ပြထားတာကတော့ မြန်မာအစားအသောက် ဟင်းလျာတမျိုးဖြစ်တဲ့ ငါးနဲ့ ပုဇွန် ဟင်းလျာ တခွက်ပါ။ ခရမ်းချည်သီးနဲ့ ချက်ထားတဲ့...
မြန်မာ့ရုပ်သံမီဒီယာတွေရဲ့ အခြေအနေကို ဆရာဆူးငှက်သုံးသပ်ထားပါတယ်။
မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း အနုပညာရှင်အဖွဲ့ နှင့် ဥရောပတေးဂီတပညာရှင်အဖွဲ့ အကူအညီဖြင့် အနောက်ဥရောပတခွင် မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်းတေးဂီတကို လှည့်လည်ဖျော်ဖြေခဲ့စဉ် မြန်မာ့ဂ...
ညာဘက်က ရန်သူကခေါင်းပြူပြီး ငါ့ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်
* By သီတဂူဆရာတော်*
ယနေ့ နိုင်ငံရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်နေရာမှာ အသေးအမွှားကိစ္စလေးကနေ ဘာသာရေး မငြိမ်မသက်မှုတွေ အထိ ရောထွေ...
ဒီနေ့မြင်တွေ့နေရတဲ့လက်ပံတောင်းတောင် အငြင်းပွါးမှုများကို ဘက်မလိုက်တဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလျှင်
NATIONAL LEAGUE FOR ALL BURMA REFUGEES ( N L A B R)
ကမ္ဘာ့သတင်းများ 26/02/2013 နိုင်ငံတကာသတင်းများ ဆီးရီးယားအတိုက်အခံတွေ နိုင်ငံတကာညီလာခံ တက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်
*ကမ္ဘာ့သတင်းများ ** 26/02/2013*
*နိုင်ငံတကာသတင်းများ** ** *
*ဆီးရီးယားအတိုက်အခံတွေ နိုင်ငံတကာညီလာခံ တက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်*
ဒီသီတင်းပတ်အတွင်း အီတလီ နိုင်ငံမှာ...
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဆားဘီးယား သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဆားဘီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး H.E. Mr. Ivan Mrkic ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှ...
ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် စေခိုင်းခံရသူ မြန်မာအမျိုးသမီး၁၀ဦးပါဝင် ၅ ဦးဟာ အသက်မပြည့်တဲ့သူတွေ ဖြစ်နေ (ရုပ်သံ)
ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်နေ့ညက ပြည့်တန်ဆာ
အဖြစ် စေခိုင်းခံရသူ မြန်မာအမျိုးသမီး
၁၀ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး အဲဒီထဲက ၅
[image: thn-21-12-12-2s]ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ရောက်ရှိလာသော အရေးပေါ်လူနာများအား ကုသမှုအားလုံးတွင် အခမဲ့ကုသပေးနိုင်ရန် စီစဉ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ရ...
ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်ယာဝင်တဲ့အချိန်ကျရင် အိပ်ပျော်ခါနီးဖြစ်နေတဲ့အချိန် အိပ်မက်လိုလိုနဲ့ တစ်ခုခုထဲကျသွားသလိုဖြစ်ပြီး ရင်ထဲမှာအေးခနဲဖြစ်သွား၊ ပြီးရင် ခန္တာကိုယ်မှ...
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ရုပ်သိမ်းပေးရန် အာဆီယံတိုက်တွန်း
၈၈၈၈ ပြည်သူ့ နေ့ စဉ် မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ် [...]
F မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၉-၁၀-၂၀၁၂ - နံနက်ပိုင်း)
- မြန်မာအစိုးရတပ် လက်နက်ကြီး ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ကချင်ပြည်သူ ၃ ဦး သေဆုံး ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ click
- လက်နက်ကြီး ကျည်ကြောင့် ဖားကန့်ဒေသ ရွာသား ၃ ဦး သေဆုံး click
Hot: ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂသို့ လေ့လာရေးနှင့်ခရိုင်ခြင်းညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ရန်အတွက်ရောက်ရှိနေသော မော်လမြိုင် ခရိုင်ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှ...
ABSDF -ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်း ဘိုဘိုရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီး အစ အဆုံး
ABSDF -ကျောင်းသားရဲဘော်ဟောင်း ဘိုဘိုရဲ့ မြောက်ပိုင်း ခရီးအစ အဆုံး(အပိုင်း၁မှ၁၄ထိ)
*ဆေးပင်အဖြစ်သာမက ဘာသာရေးစာပေတွေမှာပါ အတွေ့ရများတဲ့ အပင်တွေထဲမှာ ပင်စိမ်းပင်*
**ဟာ ထင်ရှားပါတယ်။ ပင်စိမ်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဗုဒ္ဓစာပေ၊ဟ...
နိုင်ငံသား ပါဝင်ပတ်သက်မှု နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး
နိဒါန်း နိုင်ငံသား ပါဝင်ပတ်သက်မှု (Citizen participation) ဆိုတာကို ဒီမိုကရက်တစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သင်္ကေတ တခုအဖြစ် နိုင်ငံတကာ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ သတ်မှတ်ထားကြပါတ...
ရနျကုနျမွို့ ရှဂေုံတိုငျ တျောဝငျနှငျးဆီ ခနျးမတှငျ တောငျသူ လယျသမားမြား၊ ရှနေ့မြေား၊ ပညာရှငျမြားနှငျ့ နိုငျငံရေးသမားမြား...
cnn ကလွှင့်သွားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ခရီးစဉ်
[image: The Smartphone era]
Vestibulum mi quam, sollicitudin eget consectetur sit amet, tincidunt id ipsum. Praesent non ligula semper augue lobortis posue...
8888 New Generations Team
ကိုကျော်ကျော်ကိုချိုတူး ( ဆောင်းယွန်းလ)ကိုငြိမ်းချမ်းကိုစိုးလွင်ကိုစံမြင့်ကိုဇော်နိုင်ဝင်း ( ကိုညီညီခက်)ကိုဇော်နေယျ( ကိုမင်္ဂလာ)ကိုဌေးအောင်ကိုပြည်လင်းထူး ( ကိုပြည်ကြီး )ကိုဗလိုင် ( အမေ့သား )ဖိုးသက် ( ဖိုးဇီဝ )ကိုဘုန်းတင့်ကိုတေဇသူရကိုထွန်းဝေမမိုးမိုးဇင်ကိုမင်းနိုင်ကိုမင်းသူကိုမောင်မောင်လေးကိုမောင်မောင်ဝင်းမလေးလေးနွယ်ကိုလင်းအောင်( ဧရာ)ကိုဝင်းမောင် ( လိုတရ၀င်း)ကိုသောင်းထွဋ္ဋ်ဦးကိုတင်မြင့်ကိုတင်ထွဋ္ဋ်ကိုထွန်းဇော်မိုး( ကိုမော်ကျွန်း)ကိုထွန်းထွန်းဦးကိုနီထွန်းကိုနေစိုးကိုအောင်ခိုင်မြင့် ( မင်းရဲကျော်စွာ)Please contact to :http://8888newgenerations.blogspot.com/Ko Soe Lwin: naing99@bigpond.com>) , AustraliaKo Aung Khaing Myint .( minyekyawswar8888@gmail.com ) CanadaPho Thet . poeziwa@hotmail.com USAKo Baloi Aung Soe ( aungsoebaloi2010@gmail.com ) Denmark Ko Tun Wai ( kotunwai@gmail.com ) Japan
Link Lists ,videos and မြန်မာစာအုပ်များ
သမိုင်းတစ်ကွေ့မှ သင်္ကာရှင်းပွဲ ၊ ဦးထွေးမြင့် ။
နေရာတကာ’ သတင်းဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ “စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်း သားစစ်သည်တော်များအဖွဲ့ ဦးဆောင်သူတဦးဖြစ်သည့် ကိုရဲသီဟ (ခ) ကိုစန်း နိုင်နှင့် အင်တာဗျူး”
ဒုတိယအကြိမ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အရ အောက်တိုဘာ ၁၂ ရက်နေ့တွင် လွတ်မြောက်လာသည့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူ ၂၀၆ ဦး၏ အမည်စာရင်း
အင်းစိန်ထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ( ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၁ )
Shweo( မြန်မာ့ရုပ်ရှင်, သီချင်း )
Burmeseclassic ( မြန်မာ့ရုပ်ရှင် )
ရောင်ခြည်ဦး အလုပ်သမားရေးရာဂျာနယ် ( ဇွန် ၊၂၀၁၁ )
တာရာမင်းဝေ အမှတ်တရ စာမူများ စုစည်းမှု
ယနေ့မြန်မာ ( Burma today )
News Now ( Burma )
jacba Burma ( မြန်မာပြည်သား )
ရဲရင့်ငယ် ( ကနေဒါ)
Burma VJ - I
Burma VJ - II
Burma VJ - III
Burma VJ - IV
Burma VJ - V
Burma VJ - VI
Burma VJ - VII
Burma VJ - VIII
Burma VJ - IX Final
၈၈၈၈ သီချင်း ( MTV )
မြန်မာစာအုပ်များ ( Burma E-Books )
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - ရှားလော့ဒေ၀ီနှင့် ဘာသာပြန် ကဗျာများ
တက္ကသိုလ် ဘုန်းနိုင် - ပညာရဲ့ သဘော
“ဘ၀ထဲက ရတနာ၊ ရင်ထဲက ကဗျာ” ( တင်မိုး )
Che Guevara on Revolutionary Medicine
ဆရာဇော်ဇော်အောင်ရဲ့ “အနုပညာ၏အသုံးဝင်မှုတန်ဖိုးနဲ့ အနုပညာ၏
မြန်မာ့ စာပေ စာအုပ်စင်
တို့ ခေတ်ဂျာနယ် ၁
တို့ ခေတ် ဂျာနယ် ၂
ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှ ကင်းလွတ်ရေး) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော အတ္ထုပွှတ္တိ ၁
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၂
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၃
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းကျော်ဇော အတ္ထုပ္ပတ္တိ ၄
(အရှေ့ ကနေ၀န်း ထွက်သည့်ပမာ ၁)သိန်းဖေမြင့်
(အရှေ့ ကနေ၀န်းထွက်သည့်ပမာ ၂)သိန်းဖေမြင့်
ဒေါက်တာ သန်းထွန်း သမိုင်းနှင့်စကားပြောခြင်း
လွတ်လပ်ရေး အမျိုးသားနိုင်ငံရေး နှင့် ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှု (ဦးခင်မောင်ကြီး)
၁၉၃၀ တ၀ိုက် မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်း (သိန်းဖေမြင့်)
Zaw Gyi Burmese Fonts
အားလုံးသူ ပူးပေါင်းလုပ်ကြရင်... ဒီမိုကရေစီးလမ်းမှ နောက်ပြန်လှည့်သွားနိုင်မည်​မဟုတ်..။
New Generations Blog သည် မည်သည့်နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း၏ သြဇာခံ မဟုတ်သလို မည်သည့် NGO နှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုမရရှိပဲ လွတ်လပ်မှု ၊တရားမျှတမှု ၊ ငြီမ်းချမ်းရေး စသော ဒီမိုကရေစီနှင့်လူ့အခွင့်အရေးများ မြန်မာပြည်တွင်ဖြစ်ပေါ်ထွန်းကားရေးအတွက် တတ်နိုင်သည့်ဖက်မှတတပ်တအားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများ၏လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်ရေးသားနိုင်သောဘလော့ဂ်အဖြစ်ဖန်တီးတင်ဆက်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။ဝေဖန်အကြံပြုသူများ နှင့် လာရောက် လည်ပတ်ဖတ်ရှုသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည် ။